HS:- Shir ay iskugu yimaadeen jaaliyada beesha Xawaadle ee UK oo ka dhacay magaalada Birmingham City
Posted by admin on January 09 2012 14:28:22
HS:- Shir ay iskugu yimaadeen jaaliyada beesha Xawaadle ee UK oo ka dhacay magaalada Birmingham City oo guul ku dhamaday kadib markii lag soo..........Wararka maanta Jan,9/2012
HS:- Shir ay iskugu yimaadeen jaaliyada beesha Xawaadle ee UK oo ka dhacay magaalada Birmingham City oo guul ku dhamaaday kadib markii laga soo saaray go,aano wax ku ool ah oo wada anfacaya beesha iyo reer Hiiraan.
Shirka oo ay marti galiyeen jaliyada beesha ee ku nool Birmingham City iyadoona ay ka soo qeyb galeen gudiyada u dhisan jaaliyada UK iyadoo ay magaalo kasta soo dirsadeen gudoomiyahooda iyo dhawr qof oo wakiil ka ahaa. gudiyada oo ka soo kala dhaqaaqay magaalooyinka ay beeshu ku badan tahay ayaa ugu danbeyn iskugu tagay magaalada marti galisay shirka oo ay ku sugnaayeen waxgarad, aqoonyahano iyo dhalinyaro magac iyo sumcadba ku dhax leh beesha iyadoona ujeedada shirku ahaa sidii meel looga soo wada jeeshan lahaa jaaliyaduna ay qeyb mug leh oo dhinackasta leh uga qaadan laheyd dadaalada ka socda Hiiraan ee ay wadaan waxgaradka Hiiraan iyadoo leys tusiyey in hadii si lama filaan ah loo iclaamiyo shirweyne aan loo kala harin si loo soo celiyo midnimadii iyo wadadhalashadii ka dhaxeyn jirtay reer Hiiraan iyo Somaliweyn iyadoona xooga la saaray ka hadalka xaaladaha ka soo cusboonaaday Hiiraan.
Dood dheer iyo falanqeyn kadib waxaa leysla gartay in shirka laga soo saaro qodobo ay jaaliyada beesha ku mideysan yahiin oo loo gudbiyo jaaliyadaha kale si loo ogaado meesha ay reer UK oo qeybweyn ku lahaa qilaafyada intooda badan ka taagnaa Hiiraan maadama ay kala taageeri jireen markasta kooxaha is magacaaba ee aysan cidina dooran intooda badan.
Waxaana mudadii uu shirku socday gudi ka koobnaa ilaa 5 qof oo aqoonyahano ah loo saaray iney soo diyaariyaan qodobada shirka kadibna waxey kula soo laabteen gudiyadii jaliyadaha ee ka kala yimid magaalooyinka kala duwan ee dalka UK waxeyna soo saareen qodobo aad ay ula dhaceen marti sharaftii shirka iskugu timid iyadoo loo codeeyey qodobada ugu danbeeyna rag gooyni ah loo xilsaaray iney gaarsiiyaan bulshada inteeda kale.
Inkasta oo aanu dooneyn in aanu ka hor dhacno qodobada maadama aysan wali na soo gaarin hadana warar lagu kalsoonaan karo ayaa shegaya in ay qodobadu ka mid yahiin.
1- Waxaa siweyn loogu mahadceliyey madasha shirka xoogagii reer Hiiraan ee xoreeyey magaalada Belet Weyne.
2- In jaaliyadaha Uk ee Beesha ay si buuxda u taageeraan dadaalkasta oo lagu mideynayo reer Hiiraan iyagoona soo dhawynaya in ay marka hore inta aan loo gudbin reer Hiiraan ay shir u gaar ah beeshu iskugu timaado kaasi oo ka dhaca gudaha Hiiraan.
Inkasta oo ay qodobadu intaan ka badnaayeen hadane waxey muhiimadu aheyd in uu shirku ku dhamaday guul iyadoo ay xusid mudan tahay in dhamaanba intii meesha iskugu tagtay oo qaarkood kala taageeri jiray kooxahii iskaka soo horjeeday Hiiraan ee sameystay maamul goboleedyada aan loo dhameyn meel iska dhigeen iyagoona u muuqday iney hada kadib talada uga danbeyn doonaan waxgaradka Hiiraan sida Ugaasyada, wabarada, Salaadiinta oo ay shacabku u sameystaan maamul adag.
Reer Hiiraan ayaa u muuqda iney hada kadib ka tashanayaan shaqsiyaadkii dantooda gaarka ah u carari jiray ee ay bulsahdu u afduubneed hadey noqon lahaayeen kuwo qab jifo isku baheystay amaba qaab beeleed iyadoona hada intii wanaag doon ah oo dooneysa horumarka Hiiraan ay talada u deyn doonan waxgaradka oo waayadan danbe ay karsaamadooda meel uga dhaceen dhaliyaro dadoodu ka yar tahay qaarood 30 sano iyo shaqsiyaad dibadaha ka taageera iyadoo ay ujeedadoodu tahay oo kaliya dano qabiil.
Sidoo kale waxaa ka socda shirar noocaani oo kale ah wadamo badan lakisne waxa nasiibkoodu noqday jaaliyada UK iney shir deg deg ah iskugu yimadaan kadibna taageeraan dadaalkasta oo lagu mideynayo reer Hiiraan